Kugadziridza Wall & Painting
General Simba Zvishandiso
R & D Nyanzvi
Zvirinani tinzwisise kambani yedu kuburikidza neVR
zviitiko zvikuru zvekusimudzira brand
Burley Zvishandiso zvakagadzwa zviri pamutemo. Uye chikuru kugadzira uye kugadzira mota yezvishandiso zvemagetsi.
Zvishandiso zveBurley zvinotanga kugadzira uye kugadzira maturusi emagetsi, zvinosanganisira angle ginder, cheka saha, polisher uye kupisa pfuti, kukanganisa drills.
Unobudirira kugadzira akateedzana evasanganiswa uye musanganisi padhi, kunyanya kuve nechokwadi cheEU neAmerica misika.
Dhizaini uye gadzira DRYWALL SANDERS.
Enda kune fekitori nyowani nekukura kwechirimwa che7000m2.Seta wega wega-sosi yekuparadzanisa.
Kusvika kushandira pamwe nevazhinji Vanozivikanwa mazita uye vatengesi vatengesi Kuwedzera zvigadzirwa zvinosvika mukugadziriswa kwemba uye nzvimbo yekuvaka.
Wedzera fekitori nyowani, uye yedu pachedu 500m2 yekuyedza lab inotanga kushandisa.
Chengetedza ZVINOKUDZIDZA ZVINHU ZVINOGONESESA; MADZIDZO ETSVA ekuwana huwandu hwekugadzira.
Yakashongedzerwa ne19 gungano mitsara uye 400000pcs yekugadzira kugona.More uye yakawanda otomatiki michina yakashandiswa pamusangano mitsara.
Plastic jekiseni Wekishopu
Tine vashandi vane hunyanzvi, vakapfuma-ruzivo dhizaini dhizaini uye vane mutoro QC.
Kugadzira Maitiro Musangano
Yakashongedzerwa ne15+ CNT michina uye 24+ Dhijitari yekudzora mamoto. 230000 rinovira pamwedzi.
Neruzivo rwema motors kubvira gore 1996. 7 rotor mitsetse uye mashanu stator mitsara.5 seti pamwedzi.
20000㎡ imba yekuchengetera ine kurodha inokwana 150000pcs yezvakagadzirwa zvigadzirwa.
100000pcs mapaddles pamwedzi, 150000 inoisa isingawanzo mota mota pamwedzi yezvigadzirwa zvemukati, 10000 seti laser yekucheka zvikamu zvisina kumira pamwedzi.
500㎡ yekuyedza lab inokwanisa kuita EMC ROHS tembiricha kumukaKuchembera kuyedza kwepurasitiki zvimedu nezvimwe ..,
Zvigadzirwa zvinotumirwa kunze
Wedzera: Maodzanyemba-kumabvazuva Maindasitiri Zone, Shuxi Street, Wuyi County, Zhejiang
Copyright © 2021 BURLEY Zvishandiso Zvehunyanzvi naMEEALL